IRenault ithuthukise iKoleos
FANELESIBONGE BENGU | June 27, 2020
UKULETHA izimoto ezintsha ezifanele amakhasimende akuleli nokuzikhandla ekumaketheni yikhona okuletha impumelelo kwaRenault South Africa njengoba ilokhu ikhula minyaka yonke.
UWayne van der Merwe oyiProduct Manager kule nkampani ekhuluma nabezindaba ngoLwesithathu ekuseni uthe akuyona inhlanhla ukuthi bayakhula kodwa ukusebenza kanzima.
Ngonyaka odlule badayise izimoto ezingu-27 148 futhi bazimisele ngokuqhubeka nokunyuka. Bathule iKoleos ethuthukisiwe kanjalo neMegane R.S. 300 Trophy entsha.
Ngaphambili iKoleos ine-grille egqize nge-chrome kwashintsha futhi nobhampa one-skid plate entsha. I-chrome igudla ezinhlangothini ize iyoshaya ngemuva. Amalambu angamaLED futhi inamarimu amasha angu-18 inch.
Ngaphakathi ine-chrome esiteringini, egiyeni nalapho kuphuma khona umoya. Izihlalo zangaphambili uzihlela ngogesi futhi ziyisikhumba. Bekungaba kuhle ukube uyakwazi ukuzifudumeza noma uziqandise. Engikuthandayo ububanzi bayo ngoba abagibeli abahlanu bahlala ngokukhululeka futhi akubangiswana ngokushaja ngoba kunezimbo ezimbili ze-USB ngaphambili nangemuva. Isikhala ebhuthini singu-464 litres futhi uma ulalise izihlalo siba ngu-1 795 litres.
Ngaphambili kukhona i-touchscreen enkulu lapho ulawula khona umsakazo, inkombandlela, iselula uma uyixhume nge-Apple CarPlay noma i-Android Auto, ukubona imininingwane ngohambo lwakho nokuhlela i-aircon. Bekungaba kuhle ukuba umsindo uwulawula ngenkinobho ukuze kusheshe kunokuciphiza kwi-screen.
Kunamalambu akhanyisa ngaphakathi futhi uyazikhethela wena umbala ukuthi akhanye kanjani. Obunye ubuchwepheshe enabo buhlanganisa ukuthi ibike uma kunemoto ekwi-blid spot nokuthi ikutshele uma uzoshayisa ngesikhathi upaka.
Ngaphansi kwebhonethi kunenjini kaphethroli engu-2.5 litre enamandla angu-126kW ne-torque engu-233 Nm. Isebenzisa i-gearbox eyiCVT. Kukhona i-4x2 ne-4x4 ebesihamba ngayo. Ishintsha buthule futhi ihamba kamnandi kodwa uma uzodlula enye imoto kumele ukale kahle ngoba isivinini asinyuki ngokushesha. Ngo-100km ibidla amalitha angu-8.4.
Eyi-4x4 uyayikhetha ukuthi idonse ngamasondo amabili noma womane.
I-Renault Koleos yiSUV enkulu okungamele uyizibe ngoba iyazifeza izidingo ikakhulukazi kulabo abanemindeni. Ukuphakama kwayo kwenza kungabi yinto enzima ukuthatha uhambo oluze lukufake nasobhuqwini.
OKUFAKA UMA UTHANDA:
Adjustable Leather seats (Expression Model)R12 000
Ifika ne-warranty yeminyaka emihlanu noma * -150 000km, service plan yeminyaka emihlanu ne anti-corrosion warranty yeminyaka eyisithupha.